Banyere Anyị - Zhejiang Estar Mechanical Co., Ltd
Zhejiang Feiyu akpaaka Technology Co., Ltd.was tọrọ ntọala na 2004, a na-dabere na nyocha na mmepe, rụpụta na ire nke eji amị ngwaahịa dabeere ụlọ ọrụ. Ihe karịrị 20 ẹdude technology R & D pesonel, ngwaahịa e ọtụtụ-eji akpakanamde ụlọ ọrụ, na-ewu ígwè, Metallurgical ụlọ ọrụ, mmiri Conservancy na hydropower, ígwè n'ichepụta ihe karịrị 30 ogidi ọrụ, bụ na anụ ụlọ na-amị ụlọ ọrụ ụtọ a na-aha nke emeputa.
Zhejiang estar n'ibu injinịa Co., ltd. Specializes na mmepụta nke onwe atụ n'ígwè bushing, ịnwụ nēfe anwụ ma na-anwụ nēfe akụkụ, mmanụ sintered Bushing, syn mgbanaka, na PTFE tilting na mpe mpe akwa Tinyenụ amị.
The Company n'atụghị egwu mgbanwe ẹdude ụlọ ọrụ n'ihu. Na ndabere nke na-ewusi ọzụzụ nke mbụ talent, Company ọtụtụ Isonye na-elekọta mmadụ elites, n'ụzọ zuru ezu implements oge a management usoro na ọhụrụ ahịa atụmatụ, na ga itinye onwe ya na-na-adịte mmepe nke onwe onye na-atụ n'ígwè amị ụlọ ọrụ. The ụlọ ọrụ na-agbalịsi ike jikwaa na zuru okè na usoro. Na ya elu management usoro, ụlọ ọrụ eguzobewo a zuru (ISO9001 ISO / TS16949) quality management usoro dabeere na àgwà iwu nke "Quality mbụ, Ebe E Si Nweta Mbụ na Sustainable Uto", na ya àgwà na arụmọrụ ruru esenidụt Yiri ngwaahịa na elu larịị. Dị ka otu onye nke a maara nke ọma biarin ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na Jiangsu, Zhejiang, Jiashan Feiyu nwere a ezi uche ulo oru okirikiri nhọrọ ukwuu na nọgidere mma n'ichepụta ike na n'ichepụta larịị. Ebe ọ bụ na oruru nke ụlọ ọrụ, ọ eguzobewo a oru ngo na-ada atụmatụ mmepe nọgidere innovate ngwaahịa aka competitiveness nke ụlọ ọrụ, na mgbakwunye na-ịlele mmepụta, na-aga n'ihu mgbanwe na mmepe nke ọhụrụ ngwaahịa.
Inyocha ahịa, dabeere na ụwa anọgide na-izute esiwanye iche iche ahịa, elu-edu mkpa, ma na-mụbaa mba ọzọ ahịa na mba ahịa. Ngwaahịa na-exported na Western Europe, America na Southeast Asia karịa 20 mba na mpaghara. The ụlọ ọrụ ga n'ihu mụbaa kwụ ụlọ ọrụ mmekorita, ike aku nke ọnụ ọgụgụ, n'ụzọ zuru ezu na-emeghe ọhụrụ ubi, enweta ọhụrụ uru nke ụlọ ọrụ na-aghọta ya nke mmepe usoro ebumnobi, na ike na-ghar-eme n'ọdịnihu na ndị enyi si n'agbụrụ dị iche iche nke ndụ.